Q4-2075/76(Q4-2075/76) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आईपीओ असोज ११ गतेबाट निष्कासन हुने
डिप्रोक्स लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा असोज २३ मा, बुक क्लोज कहिले ?
दशैंमा सानिमाको बम्पर योजना: मुद्दतिमा उच्च ब्याज, मासिक भुक्तानी
दशैंमा सांग्रिलाको उपहार, मुद्दतिमा आकर्षक ब्याजदर
गोर्खाज फाइनान्सको खुद नाफामा ५३२%को छलाङ, रिजर्बको आकार ४६.५६%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकमा प्रगति गर्दै गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७५/७६ मा खुद नाफामा ५३२.३३ प्रतिशतले छलाङ मारेको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थाले खुद नाफा ७ करोड १० लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा १ करोड १२ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो । यो हिसाबले संस्था...
प्रमुख वित्तीय सूचकमा बेस्ट फाइनान्सको लोभलाग्दो प्रगति, खुद नाफामा ८४.६२ प्रतिशतको छलाङ
काठमाण्डौ । बेस्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रमुख वित्तीय सूचकमा छलाङ मारेको छ । संस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा ८४.६२ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थाले खुद नाफा ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा ४ करोड ४२...
कुन बैंकले कति नाफा कमाए ? लाभांश बाँड्नसक्ने क्षमता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ वटा वाणिज्य बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.५८ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएका छन् । समीक्षा अवधिको सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकले ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । सोही अवधिमा अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा ५२.५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल...
सहारा विकास बैंकको खुद नाफामा ५५.९१% बढोत्तरी, रिजर्बको आकार २६.३७%ले वृद्धि
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकमा प्रगति गर्दै सहारा विकास बैंक लिमिटेडले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफामा ५५.९१ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद नाफा १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा १ करोड २३ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो । अघिल्लो वर्ष १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ...
युनाइटेड फाइनान्सको खुद नाफामा ८७.९३% को छलाङ, ८% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने
काठमाण्डौ । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरणको क्षमता बनाएको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थाले ८ करोड १० लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद नाफा १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ७ करोड ९ लाख रुपैयाँमा थियो ।...
नेशनल लाइफद्वारा बिमाशुल्क आर्जनमा २७.१७% को फड्को, बोनस दरमा पनि सुधार
काठमाण्डौ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म ७ अर्ब ८० करोड भन्दा बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा कम्पनीले बिमा शुल्क आर्जनमा २७.१७ प्रतिशतको प्रगति गरेको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले पुनर्बिमा कमिसनबाट ३ करोड ८२ लाख, लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट २ अर्ब ९ करोड, बिमालेखको...
कन्काई विकास बैंकले लाभांश ७%सम्म बाँड्नसक्ने, खुद नाफा ३०%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । कन्काई विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ७ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरणको क्षमता बनाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बढी वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद नाफा ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा थियो । बैंकले...
एनआइसी एशियाद्वारा प्रमुख वित्तीय सूचकमा ‘चमात्कारिक प्रगति’
काठमाण्डौ । शाखा बिस्तार र ब्राण्डिङमा आक्रामक बनेको एनआइसी एशिया बैंकले आफ्ना प्रमुख वित्तीय सूचकहरुमा समेत आक्रामक प्रगति गर्न थालेको छ । यो बैंकको आक्रामक रणनीतिका कारण नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुलाई बैंक व्यवस्थापनले वित्तीय विवरणमा चमात्कारिक प्रगति गर्दै गतिलै पाठ सिकाइदिएको छ । उच्च संचालन खर्चका बाबजुद बैंकले गत वर्ष...
आईसीएफसी फाइनान्सको खुद नाफामा ७६.२५%को छलाङ, प्रतिसेयर आम्दानी रु. १५.९०
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकमा प्रगति गर्दै आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ७६.२५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले ७ करोड ९५ लाख...
देवः विकास बैंकले ८%सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, सञ्चालन मुनाफा घटे पनि ब्याज आम्दानीमा बढोत्तरी
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरणको क्षमता बनाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले २७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बढी वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद नाफा ३८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ३७ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा थियो ।...
एनएमबी बैंकले १३%सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खुद नाफा २४.६४%ले वृद्धि, रिजर्बमा ४२.०७%को छलाङ
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरणको क्षमता बनाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले १ अर्ब २७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढी वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा थियो ।...
ज्योति विकास बैंकले १३%सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खुदा नाफामा ४६.३३%ले बढोत्तरी
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरणको क्षमता बनाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद नाफा ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।...
लाइसेन्स शुल्कले नेपाल टेलिकमको नाफामा पहिरो
काठमाण्डौ । नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमीटेड(नेपाल टेलिकम)को खूद नाफामा पहिरो गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म यो कम्पनीको खूद नाफा घटेर १० अर्ब २० करोडमा सीमित बन्न पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म यो कम्पनीको खूद नाफा १७ अर्ब ४८ करोडको उचाईमा थियो । यसरी हेर्दा कम्पनीको खूद नाफा ४१.६१ प्रतिशतले घटेको...
शिवम सिमेन्टको नाफामा ३१.४८% को प्रगति, रिटेन्ड अर्निङ रु. ३.२२ अर्ब
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट्स लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म १ अर्ब ५० करोड खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३१.४८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको नाफा १ अर्ब १४ करोडमा सीमित थियो । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ३४ करोड संचालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष...
प्रमुख सूचकमा हिमालयन बैंकको फड्को, २३% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफामा ५१.७९%को छलाङ
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता बनाएको छ । समीक्षा अवधिको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । बैंकले समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५१.७९ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । बैंक यो वर्ष २ अर्ब ८४...
अर्थमन्त्री भन्छन्-'हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो रहेछ !'
असोजको दोस्रो साताबाट अग्रिम टिकट खुला गरिने
‘संस्थागत लगानीकर्ताको कमीले सेयर बजार एकहोरोजस्तो देखियो’
प्राविधिक रुपमा यस्तो देखियो सेयर बजारमा आरबीसीएलको आगामी यात्रा
बिजशालाको विषयमा भ्रम फैलाउनेविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी
यो वर्ष कुनै पनि बैंकले दशैंअघि बोनस नखुवाउने
प्रभावकारी बन्दै वृज सिमेन्टको ‘एक्सपर्ट मेसन क्लब’, आबद्ध सदस्यको परिवारलाई रु. ५ लाख सहयोग
ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘८.५% डिबेन्चर २०८६/८७’ नेप्सेमा सूचीकृत
कामना सेवाको एनआरएन बचत खाता सञ्चालनमा, ७% ब्याज दिने
आरटीजीएस प्रणाली शनिबार पनि खुला रहने
नेपाल बंगलादेश बैंकको विस्तारित सेवा केन्द्र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग परिसरमा